वर्षका दश चर्चित नारी - Enavanari
वर्षका दश चर्चित नारी
२०७४ साललाई फर्केर हेर्दा बिभिन्न क्षेत्रमा रहेका महिलाहरुले राम्रै चर्चा कमाउन सफल भए । राजनीति देखि बिभिन्न क्षेत्रमा कतिपय महिलाले सफल भएर चर्चा बटुले भने कतिपय महिलाले असफल भएर पनि । विभिन्न विवादहरुमा मुछिदै भएपनि यो बर्ष आफुलाई चर्चित बनाउन सफल भए केहि सिमित महिलाहरु । यिनै कुराहरुलाई नियाल्दै यो बर्षमा को को महिलाले आफ्नो बर्चस्व कायम
राख्न सफल भए त ? उनीहरुको बारेमा नवनारीले गरेको अध्ययनको आधारमा हामीले यहा“ प्रस्तुत गरेका छौ ।
भोजपुरबाट विद्यार्थी राजनीतिमा उदाएकी विद्यादेवी भण्डारी जननेता मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी हुन् । २०५० सालको चुनावमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेर संसदीय राजनीतिमा
होमिएको २२ वर्षमा गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल उदारणीय व्यक्तित्व हुन् भण्डारी ।
उनी वातावरणमन्त्री, रक्षामन्त्री हुँदै नेपालकै अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने पद राष्ट्रपति बन्न सफल भएकी हुन् । त्यसो त पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल नारी हुन् भण्डारी । जो पहिलो कार्यकाल सकेर हाल दोस्रो कार्यकालका लागिसमेत निर्वाचित भएकी हुन् । माने भन्ज्याङ्
भोजपुरमा जन्मिकी भण्डारी एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)बाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट संसदसम्म पुग्न सफल भण्डारी नेपालमा गणतन्त्र आएपछिको दोस्रो र तेस्रो राष्ट्रपति
हुन् । स्थानीय चुनाव, प्रतिनिधि तथा प्रदेशको चुनावपछि तेस्रो राष्ट्रपति चुनावको बेलामा चौतर्फी विरोध नभएको भने होइन तर समय, योग्यता र कार्यक्षमताका कारण दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति बन्ने अवसर उनैको
पोल्टोमा आयो । दोस्रोपटक राष्ट्रपति हुँदा प्रत्येक कार्यक्रममा साडी फरक भएको भनेर चर्चामा रहेकी भण्डारी सफल, अब्बल महिला तथा राजनीतिज्ञका रुपमा समाज र राष्ट्रमा परिचित छन् ।
शिवमाया तुम्बाहाम्फे, उपसभामुख
एमाले भातृ संगठन अनेरास्ववियूको तत्कालिन प्रारम्भिक कमिटी अध्ययन दलबाट
राजनीतिमा प्रवेश गरेकी कानुनी पृष्ठभूमिकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे लामो समयदेखि एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी छिन् । राजनीतिक स्थायीत्वका लागि सक्षम
रहेकोले जनजाति महिलाहरु पनि अवसर पाएमा अघि बढ्न सक्ने बताउँछिन् उनी ।
राज्यका तर्फबाट ३३ प्रतिशत महिलालाई हक अधिकारको कुरा गरेर मात्र नहुने भन्दै उनी महिला पनि क्षमताको आधारमा आफ्नो स्थान लिन सक्ने बताउँछिन् । एमाले भएकैले उपसभामुख भएको भन्ने आरोप उनलाई भएपनि क्षमताका कारण आफू अगाडि आएको बताउँछिन् । उनी नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछिको तेस्रो महिला उपसभामुख हुन् ।
सुशिला कार्की, पूर्व प्रधानन्यायाधीस
केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा ओलीले नै संवैधानिक परिषदमा पूर्व प्रधानन्यायाधीस सुशिला कार्कीको नाम सिफारिस गरेका थिए । बुवाले डाक्टर बनाउन चाहेका कार्कीले वकिल रोजिन् र अन्तत
विराटनगर स्थित पुनारावेदन अदालतको बार अध्यक्षसमेत हुन सफल भएकी थिइन् । बि.स २०३५ सालबाट वकालत सुरु गरेकी कार्की सन् २००९ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीसका रुपमा
प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी न्यायाधीस हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरुमा फैसला गरेकी थिइन् । साधारण जीवनशैलीकी कार्की भ्रष्टचारमा सून्य सहनसिलता अपनाउने न्यायाधीसका रुपमा परिचित थिइन् ।
उनले हिंसामा परेका महिलालाई सकारात्मक पहुँच पुगोस् भनेर विशेष पहल गरिरहेको बताउँदै आएकी थिइन् । न्यायाधीसदेखि प्रधानन्यायाधीससम्मको यात्रामा उनले भ्रष्टचारीलाई तह लगाउने साहसिक न्यायपूर्ण कार्य बन्न पुग्यो । तर दुःखको कुरा, साहसिक र धेरै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई जेलसम्म पु¥याउन सफल उनी अवकासको पूर्व सन्ध्यामा महाअभियोग झेल्न बाध्य हुनु्प¥यो । न्यायको सर्वोच्च स्थानमा रहन सफल कार्की राजनीतिमा खुबै प्रभाव जमाएका
नेतालाई सम्म जेल सजाय तोक्न सफल एकमात्र महिला न्यायाधीस हुन् । उनी डिआइजी जय बहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णयलाई हस्तक्षेप गरेको आरोपमा चौतर्फी आलोचना खेप्न बाध्य भएकी थिइन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीस समाज र इन्टरनेशनल ग्लोवल प्रोगामको सदस्यसम्म भएकी कार्की न्याय क्षेत्रमा निकै अब्बल, क्षमतावान व्यक्तित्वका रुपमा चिन्छिन् । उनी प्रधानन्यायाधीस जस्तो गरिमामय पदमा पुग्ने पहिलो महिला हुन् ।
रवीना देशराज जोशी, बैंकर
स्टाण्डर्ड चार्टर बैंकमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा प्रवेश गरेकी रवीना देशराज नबिल बैंक हुँदै मेगा बैंकसम्मको यात्रामा सफलतापूर्वक अघि बढेकी छिन् । रविना बोल्ड महिलाका रुपमा चिन्छिन् । प्रशिक्षार्थीका रुपमा बैंकमा प्रवेश गरेकी जोशी मेगा बैंकको कार्यकारी उपप्रमुख हुँदै कार्यकारी प्रमुख अनिल शाहले मेगा बैंक छोडेलगत्तै कार्यकारी प्रमुखको पदमा पुग्न सफल महिला हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अर्वाड २१ सेञ्चुरी गोल्डेन फोनिक्स अवार्डबाट सम्मानित देशराज पुरुषप्रधान समाजका विरुद्धमा आवाज उठाएर वेला वेलामा चर्चामा आइरहन्छिन् । मोडलिङ्मा रुची भएकी उनी बैंकिङ् क्षेत्रमा अब्बल मानिन्छिन् । पुरुषले दुइवटा श्रीमती घरमा ल्याउँदा हुन्छ भने महिलाले पनि दुइ श्रीमान् ल्याउँदा यो समाजले स्वीकार्छ ? भन्ने उनको तर्कका कारण निकै आलोचना भएको थियो । उनको बिचारलाई गलत ब्यख्या गरेर सामाजिक सन्जाल छायो । उनी सुन्दर लुक्समात्रै होइन, काममा पनि त्यत्तिनै सिन्सियर छिन् । सानातिना कुराहरुमा अल्मलिएर आफ्नो समय बर्बाद गर्न नचाहने उनी नायिका तथा आयुष्मान देशराजकी गर्लफ्रेण्ड प्रियंका कार्कीसँग खिचिएको एउटा तस्वीर सोसल मिडियामा आएका कारण मिडियाबाजीमा समेत परेकी थिइन् । महिलाले पनि पुरुषसरह अधिकार पाउनुपर्छ र समाजमा महिलाको पनि वर्चस्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने जोशी आम महिलाहरु आर्थिकरुपमा अगाडि बढेमा महिलाको चौतर्फी विकास हुने बताउँछिन् । पछिल्लो समय देशराजका जेठा छोरा आयुष्मान देशराज श्रेष्ठको प्रियंका कार्कीसँगको प्रेम सम्वन्धसँगै रविना झन चर्चामा रहदै आएकी छिन् ।
रेडियो नेपालमा भजन रेकर्ड गराएर नेपाली सांगीतिक आकाशमा आएकी अन्जु पन्त सुमधुर स्वरकी गायिकाका रुपमा परिचित नाम हो । नेपाली आधुनिक गीत संगीत क्षेत्रकी कोइलीको रुपमा परिचित पन्त दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा आफ्नो सुमधुर स्वर दिएर विभिन्न अवार्डबाट सम्मानितसमेत भएकी छिन् । सवैभन्दा बढी गीत गाउने, सवैभन्दा बढी पुरस्कार पाउने र गीतबाट सवैभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल गायिकाका रुपमा नेपाली सांगीतिक आकाशमा चर्चामा रहेको नाम हो, अन्जु पन्त । उनीको सर्वाधिक लोकप्रीय गीत न बिर्से तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई मोबाइलमा धेरैभन्दा धेरै डाउनलोड भएको गीत हो । जुन उनको सर्वाधिक लोकप्रिय गीत मानिन्छ । नबिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई बोलको गीतबाट नेपाली सांगीतिक यात्रामा स्वच्छ छवी छर्न सफल पन्त
नेपाली सांगीतिक आकाशकी बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन् । नेवारी र थारु भाषाका आठवटा गीतमा स्वर भरेकी उनी अन्य भाषामा पनि गाउने तयारीमा छन् । एक अनलाई पत्रिकामा हिन्दू देवी देवताको नाम भएकै कारण उनले गीत गाउन अस्वीकार गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि विवादमासमेत तानिएकी थिइन् । पछि अस्वस्थ्यताका कारण गीत नगाएको स्पष्टीकरण दिएपछि उनी विवादमुक्त भएकी थिइन् । धरै श्रोताको मन मतिस्कमा बस्न सफल पन्तको यस वर्ष पनि सम्पूर्ण गीतले सफलता प्राप्त गरेका छन् । अघिल्लो वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि पन्त सफलताको शिखरमा हयाट्रिक हान्न सफल रहिन् । यही वर्ष उनले हिन्दी चलचित्रको लता मंगेशकरको स्वरमा रहेको तुजसे
नाराज नही जिन्दगी गीतलाई कभर सङ्का रुपमा गाएर झनै चर्चा बटुल्न सफल भइन् । यो गीत गाएपछि उनलाई ओर्जिनल गीतभन्दा राम्रो गएको स्रोताले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
दिपाश्री निरौला, चलचित्र निर्देशक
हास्य व्याङ्य क्षेत्रको चलचित्र निर्देशनमा चर्चित नाम हो दिपाश्री निरौला । थारु सिनेमाबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी निरौला चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । तीतो सत्यमा दिपकराज गिरीकी श्रीमतीको भूमिकाबाट चर्चाको सिखर चुम्न सफल निरौला सफल कलाकारमात्र नभई सक्षम निर्देशनका रुपमा नेपाली सिने क्षेत्रमा छाएकी महिला हुन् । नामसँग सँगै दामलाई पनि आफ्नै पोल्टोमा पार्न सफल निरौलाले तीतोसत्यमै सहनिर्देशन गरेर अनुभव बटुलेकी थिइन् । निरौलाले ठूलो पर्दाको सिनेमामा पहिलोपटक हात हालेको चलचत्रि वडा नम्बर ६ नै सुपर डुपर हिट हुन सफल भएको थियो । हास्य ब्याङ्य क्षेत्रमा अब्बल भएता पनि चलचित्र निर्माणले समाजलाई केही सन्देश पुग्नुपर्ने मान्याता राख्ने निरौलाद्वारा निर्देशित चलचित्रमा समाजमा भएका विकृति विसंगति हटाउन कथाले विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ । मिजासिली र हसिलो स्वाभावकी निरौलाको छक्का पन्जा २ ले यस वर्ष अत्याधिक व्यापार गर्न सफल भएको थियो । हालैमात्र निरौला अभिनित शत्रु गतेले पनि राम्रै व्यापार गरिरहेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा पनि यसवर्ष निरौलालाई सफलताको वर्ष वन्न पुग्यो । छक्का पन्जा २ को कथाका बारेमा नायिका ऋचा शर्माको अभिव्यक्तिले विवादित बन्यो भने उनी निर्देशित चलचित्रमा रहेको नाइलनको साडीमा बोलको गीत संगीतकारले चोरेर यस फिल्ममा
प्रयोग गरेको काण्डले पनि फिल्न मात्र विवादित बनेन, उनलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बनायो । उनी
निर्देशित चलचित्रको व्यवसायिक पक्ष हेर्दा उनको चलचित्रलाई उछिन्न कुनै चलचित्रले पनि सकेको छैन ।
मेरिना श्रेष्ठ, बाइक स्टनर
संकटा इन्टरनेसनलमा १९ वर्षको उमेरमा बाइक स्टन्ट गरेकी मेरिना श्रेष्ठ विदेशमा आफ्नो शिक्षा पूरा गरेर नेपालमै एउटा स्टन्ट खेलको अर्गनाइजरका रुपमा विभिन्न स्थानमा खेल खेलाउँदै
आइरहेकी छिन् । सानैदेखि नै गुडियाभन्दा पनि बढी लगाव गाडीमा भएको बताउने उनी सफल बाइक राइडर हुन् । बाइक स्टन्टमा महिला संख्या न्यून भएपनि अरुभन्दा भिन्न बन्ने सोच बोकेकी
श्रेष्ठले नेपालका विभिन्न स्थानमा खेल आयोजना गर्दै आएकी छिन् । बाईक स्डन्ड एक चुनौतीपूर्ण
खेल भए पनि यसले समग्र नेपाल पर्यटन भित्रायाउन सहयोग गर्ने भएकोले यस क्षेत्रमा चुनौतीसँग सामनाका लागि तयार भएको उनी बताउँछिन् । वर्षभरि खेलमै व्यस्त रहेकी श्रेष्ठ वर्षभरि नै
खेल जगतमा चर्चित रहिन् । महिलाले केही गर्न सक्दैनन् र महिलाहरु सन्तान उत्पादनका मेसिन सम्झनेहरुलाई उनले दरिलो झापड दिएकी छिन् ।
सृष्टि केसी, मोटिभेटर
पन्ध्र वर्षे उमेरमा आँखा गुमाएकी सृष्टि केसी एक सफल मोटिभेटर हुन् । भौतिक रुपमा आँखा गुमाएकी केसी एक सबल, सक्षम महिलाको रुपमा चिनिन्छिन् । आँखाको ज्योती गुमाएपछिको जीवन
भोगाईमा थुप्रै नमिठा अनुभव संगालेकी सृष्टि शारिरिक रुपमा अशक्त भएको भरमा अपहेलित हुनु परेको तिक्ततालाई उर्जामा परिवर्तन गर्न सफल व्यतिm हुन् । आँखा देख्न छोडे पनि उनले मनको आँखाले सपना देख्न छोडिनन् । दृढ संकल्प, आत्मविश्वासका साथ उनी पढाईमा अघि बढिन र एस.एल.सी मा ७०दशमलब २५ प्रतिशत अंक ल्याई सफलता पुर्वक अध्ययनलाई अघि बढाउने हिम्मत भएकी व्यक्ति बनिन् । गायन, नृत्य, वक्तृत्वकलामा पोक्त उनी १५ भन्दा बढी देशहरुमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन सफल भएकी छन् । २०६५ सालमा नेपाली साहित्य विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय टप गर्न सफल केसी सेल्फ मोटिभेटर हुन् । डान्स, एन्थ्रोपोलोजीको कोर्स नर्वे, फ्रान्स, हंगेरी र युकेबाट पुरा गरेकी उनले दृष्टिविहिनले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने आत्मविश्वास सबै दृष्टिविहिनमा आउन जरुरी भएको बताउछिन् । विभिन्न अवार्डहरुबाट सम्मानित हुन सफल व्यक्ति हुन् सृष्टि । डाक्टरको लापरबाहीका कारण आफ्नो आँखा गुमाएकी केसीको जीवनमा आधारित द ब्याल्ड रक्स स्टार भन्ने फिल्म निर्माण भयो र यसै बर्ष प्रदर्शनीमा आयो जसका कारण पनि सृष्टि चर्चित बनिन् । व्यावसायिक रुपमा फिल्म सफल नरहे पनि उनी विभिन्न मोटिभेस्नल कार्यक्रमहरुमा सफल रहिन् ।
निकिता पौडेल, चलचित्र विकास वोर्ड अध्यक्ष
उनी चलचित्र विकास वोर्डकी पहिलो महिला अध्यक्ष हुन् । गोपीकृष्ण हलका सञ्चालक तथा चलचित्र निमात्रीसमेत रहेकी पौडेल वोर्डको पहिलो महिला अध्यक्ष हुनुले पनि चर्चा बटुल्न सफल रहिन् । राजनीतिकरुपमा नियुक्ती भए पनि उनी एक अब्बल, सफल व्यक्तित्वका रुपमा यो वर्षभरि चर्चामा रहिन् । पर्व, होमवर्कलगायतका चलचित्रकी निर्मात्रीसमेत रहेकी उनलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा र पैसाको खेलका आधारमा अध्यक्षमा नियुक्त भएको चर्को आरोपसमेत
लागेको थियो भने उनी भन्दा लामो समयसम्म चलचित्र क्षेत्रमा काम गरेका केहि व्याक्तिहरुले उनको आगमनलाई स्वीकार्न चाहेनन् । अध्यक्ष बन्नको लागि चाहिने आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता भएकोले आफु अध्यक्ष बन्न सफल रहेको दाबि गर्दै उनी अगाडि बढिन् । यो बर्षको लगभग अन्त्यतिर आउन लाग्दा उनी चर्चामा आउकी हुन् ।
थ्री लभर्सबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उदाएकी प्रियंका कार्की नेपाली सिने क्षेत्रकी सफल नायिका हुन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी कार्की अभिनित चलचित्रले सफल व्यापार
गरेकाले पनि उनको ब्रान्डिङ् बलियो छ । नाई नभन्नु ल २, नाई नभन्नु ल ३, झोले, पुरानो ढुंगा, छक्का पन्जा १, फाटेको जुत्ता, छक्का पन्जा २ जस्ता सर्वाधिक व्यापार गर्न सफल चलचित्र दिन सफल प्रियंका कार्कीले चलचित्र क्षेत्रबाट धेरै अवार्ड हात पार्न सफल भएकी छिन् । पछिल्लो समय चलचित्र, म्यूजिक भिडियो तथा विज्ञापनमा व्यस्त रहेकी कार्की बैंकर रबीना देशराजका छोरा आयुष्मान देशराज जोशीसँगकोे सम्बन्धकै कारण पनि पटक पटक मिडियामा छाइरहिन्् ।
सार्वजनिकस्थलमै जोशीसँग कार्कीले चुम्बन गरेको कुरालाई लिएर मिडियाबाजी नै चल्यो । यस वर्ष चलचित्रले भन्दा पनि आयुष्मानसँगको सम्बन्धले बढी चर्चित बनायो उनलाई । समय समयमा चर्चामा रहिरहने उनी फिल्मको सुटिङ्का क्रममा बेहोश भएका कारण पनि चर्चामा
रहेकी थिइन् । यद्यपी वर्षभरि नै हात खाली नहुने नायिकाका रुपमा स्थापित कार्कीका केही सिनेमा बाहेक प्राय सिनेमा हिट हुने गरेका छन् । मिस टिन २००५ को शिर्ष उपाधी जित्न सफल कार्कीले
नेपाली सिने क्षेत्र विकसित हुँदै गर्दा हात हालेकी हुन् । कार्की अभिनित चलचित्रले यस वर्ष पनि सफलता हासिल गर्न सफल भएका छन् । प्रियंका कार्की, नायिका
नेपाली सिने क्षेत्र विकसित हुँदै गर्दा हात हालेकी हुन् । कार्की अभिनित चलचित्रले यस वर्ष पनि सफलता हासिल गर्न सफल भएका छन् ।